रोचक / विचित्र – Medianp
अफ्रिकी महादेशका धनि व्यक्ति जसलाई आफु धनि भएको विश्वास नभएरपछि सबै पैसा घरमा ल्याएर धित नमरुन्जेल हेरे
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६१७:११
काठमाडौँ । अफ्रिकी महादेशका सबैभन्दा धनि व्यक्ति अलिको डेंगोटेले आफ्नो बैँकमा रहेको सबै पैसा निकाले पछि सबैजना दंग भए । महादेशको सबैभन्दा धनि व्यक्ति भनिएका उनी १० बिलियन डलरका मालिक हुन् । तर उनले बैँकमा
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६१४:२३
काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जालको प्रयोग बढ्दै गएसँगै पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न किसिमका हर्कतहरु भाइरल हुने गरेका छन् । भाइरल हुने सबै चिज राम्रा हुँदैन् केही चेतनामुलक राम्रा कुराहरु हुन्छन् भने केही आलोचित सामाग्रीहरु पनि भाइरल
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६१३:३९
काठमाडौँ । जादु गरेर अरुलाई चकित पार्ने एक व्यक्ति दुई वर्षपछि नरकंकालको रुपमा रुखमा बाँधिएको अवस्थामा फेला परेका छन् । मस्को पुलिस शहरबाट ८० किलोमिटर टाढा रहेको घना जंगलमा भेटिएको कंकाल इभान क्लुशारेभको भएको पाइएको
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६१२:३८
काठमाडौँ । हुनत हिन्दु धर्ममा हरेक बारको आफ्नै महत्व हुने गर्दछ । ज्योतिष शास्त्रका अनुसार गुरुवार अर्थात् बिहीवारलाइ भगवान नारायण अर्थात् बिष्णुको विशेष दिनको रुपमा समेत पुजा गर्ने गरिन्छ । मान्यताका अनुसार बृहस्पति ग्रह अन्य
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६११:२९
काठमाडौँ । भारती एक ९ वर्षिय भाग्यमानी बालिकाले १० लाख अमेरिकी डलरको चिठ्ठा जितेकी छन् । आफ्नो भाग्यमानी अंक ९ मान्ने ति बालिकाले ०३३३ नम्बर रोजेकी थिइन् । मंगलबार दुबईको ड्युटी फ्रिको मिलेनियम मिलेनियर ज्याकपट अन्र्तगत
जान्नुहोस् ! पार्टनरको यी बानीको कारण आउँछ बैवाहिक सम्बन्धमा दरार !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, बैशाख ०५, २०७६१०:५९
काठमाडौँ । श्रीमन श्रीमती एक रथका दुई पाङ्ग्रा हुन् भनेजस्तै जसरी एउटा पाङ्ग्राले रथ गुड्न सक्दैन् त्यस्तै एक व्यक्तिले मात्रै जीवनलाई सफल बनाउनको सक्दैन् । एक दामपत्य जीवनलाई सफल र सुखी बनाउनको लागि श्रीमान श्रीमतीको
भागेर बिहे गरेका प्रेम जोडीलाई गाउँ फर्केपछि १ घण्टा कुखुरा बनाएर गाउँलेले दिए सजाय (भिडियो सहित)
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०४, २०७६१७:२३
काठमाडौँ । हाम्रो समाजमा अझै पनि केही प्रेम विवाहलाई अस्विकार गरिदै आएको छ । प्रेम विवाह गर्दा कतिपय जोडीहरु समाजबाट नै बहिष्कार हुनु परेका घटनाहरु धेरै रहेका छन् । यद्यपी केही यस्तो समाज रहेको छ
के तपाई आफ्नो भाग्य चम्काउने सोचमा हुनुहुन्छ ? त्यसो भए आफुभन्दा धेरै उमेरकी केटीसँग गर्नुहोस् विवाह !
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०४, २०७६१६:४७
काठमाडौँ । प्राय हरेक पुरुषले विवाहको लागि आफु भन्दा कम उमेरको महिला हेर्ने गर्छ । यो एउटा परम्परा जस्तै भएको छ । यद्यपी आज हामी तपाईहरुलाई पुरातन परम्परा तोड्दै आफु भन्दा धेरै उमेकी महिलासँग विवाह
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०४, २०७६१४:५९
काठमाडौँ । रेस्टुरेन्टमा खाएको बिल तिर्न नसक्दा चीनमा एक बाबूले आफ्नै छोरीलाई रेस्टुरेन्टमा धितो राखेको घटना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । दक्षिण चीनको एक रेस्टुरेन्टमा घटेको यो घटना यतिबेला चिनका विभिन्न सञ्चार माध्यम्मा चर्चाको
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बुधबार, बैशाख ०४, २०७६१२:१६
काठमाडौँ । हरेक व्यक्तिको फरक फरक क्षमता हुन्छ । सबै मानिसमा एउटै किसिमको बौद्धिक क्षमता हुँदैन् । कसैले गर्न नसकेको काम गर्ने व्यक्तिलाई महामानव भनिन्छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई कसैले गर्न नसक्ने केही चमत्कारिक